Caancala Dhangeessi - Fuula - Tarjaawwan jedhu filadhu
Caancala Saagi/Goodayyaa - Kutaa(lee) - Tarjaawwan jedhu filadhu
Teessumaawwan tarjaa durmurtaawaa irraa filachuu nidandeessa, ykn kan kee uumi. Yammuu teessumaa tokko akkaataa fuulaa tokkotti fayyadamtuu, fuulawwanii warri akkaaticha fayyadaman marii niharoomu. Akkasuumas, yammuu teessumaa tarjaa tokko akkaataa goodayyaatti fayyadamtuu, goodayyaawwan warri akkaaticha fayyadaman marii niharoomu. Teessumaa tarjaa, akkasuma goodayyaa baaqeedhaaf jijjiiruu nidandeessa.
Lakkoofsa tarjaawwanii isa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa keessatti barbaaddu galchi.
Akkasuuma, teessuma tarjaa durmurtaawaa tokko filachuu nidandeessa.
Qabeentaa walfakkeessii tarjaawwan mararratti facaasi
Kutaalee tarjaa-hedduukeessatti qixxaan hira.
Bal'inaa fi addaan fageegna
Yoo sanduqii filannoo Dalgee ofumaahin filatamne, dirqala dalgee fi addaanfageenya tarjaalee galchi.
Lakkoofsa tarjaa, akkasuumas yabbina fi dheerina cina tarjaawwanitti agarsiissa.
Agarsiissaa tarjaa, tarjaa tokko gara bitaatti siqsa.
Agarsiissaa tarjaa, tarjaa tokko gara mirgaatti siqsa.
Bal'ina tarjicha galchi.
Tarjaawwan gidduuti, iddoo hamma dhiisuu barbaadduu galchi.
Tarjaawwan bal'inii isaanii qixxee tahe uuma.
Durargiin teessumaa tarjaa, naannoo fuulaa osoo hintanee, tarjaawwan qofa mul'isa.
Bakki kun kan jirachuu dandaa'uu, yoo teessumaan kee tarjaa tokko ol of keessaa qabaatee qofa.
Akkaataa dhangeessuu sarara garagareessaa tarjaatiif fili. Yoo sarara gargareessaa hinfeetu tahee, "Homaa" filadhu.
Dheerina sarara gargareessaa, kan hojjaa ba'lina tarjaa akka dhibbeentaatti galchi.
Hiriira sarjaa kan sarara garagareessaa fili. Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gatiin Hojjaa sararaa, 100% gad tahe qofa.
Maalima isaa teessuma sarjaa irratti fayyadamuu barbaaddu fili. Dirqalaan kun kan jiraatu, yoo qaaqa Dhangi'u - Tarjaalee filatte qofa.
Keewwata teessuma barruu walxaxxaaf (CTL) kallattii barruu ifteessi. Amali kun kan jireessu yoo deegarsi teessumni barruu walxaxxaan dandeessisame qofa.
Title is: Tarjaawwan